Inogona here Linux kuiswa paNintendo 64? Mhinduro ... Linux Vakapindwa muropa
Inogona here Linux kuiswa paNintendo 64?
Iwe zvechokwadi rangarira iyo Nintendo 64kunyangwe iwe usingade mutambo wekunyaradza. Uye yakanga iri imwe yeanonyanyo kufarirwa makore mashoma apfuura. Yaive yechina yakaburitswa naNintendo uye ikagadziridzwa kuti ibudirire iyo zvakare yakabudirira Super Nintendo. Chinangwa chekoni iyi yaive yekukwikwidza neiyo Sony PlayStation uye Sega Saturn. Kuti vaite izvi, ivo vakagadzira inonakidza kwazvo desktop desktop fomati, iine rutsigiro rwe64MB (512 Mbit) cartridges uye NEC VR4300 64-bit 93.7Mhz CPU.
Zvakanaka, zvisinei nenhoroondo yekoni ino yaunoziva imi mese, munofanira kuziva kuti, semamwe maturusi mazhinji, Linux inogona kuiswa. Uye ikozvino pane chiteshi chitsva chakagadziriswa cheichi koni. Saka kana iwe uchine inoshanda Nintendo 64 uye uchida kuyedza zvishoma nayo, chinyorwa ichi chinokufadza iwe ...
Pakati pechimwe chezvinhu zvisingazivikanwe izvo 2020 zvakasiiwa isu tave ne new Linux port yeNintendo 64. Zvakaitika pakupera kwaZvita, nepo ruzha rwese rwevhepfenyuro nezve denda nedzimwe nyaya dzezvematongerwo enyika dzaiitika hazvina kusiya chimwe chinonzwikwa.
Anovandudza chirongwa ichi ari Lauri kasanen, uye zvinoita kunge yanga isina kuvakwa pane imwe yeakamberi maviri echikepe kuyedza kweLinux. Kasanen akataurawo pamusoro pekuti kana chiteshi ichi chinofanira kusanganiswa here, zvichipiwa kuti ipuratifomu yakare uye niche yakatetepa uye hazvinganzwisisike kuti chikumbiro chekubatanidza chigamuchirwe. Icho chimwe chinhu kune vamwe vanofarira, chinetso ... asi ichiri chinoshamisa chirongwa.
El vavariro nei Kasanen akagadzira ichi chiteshi cheNintendo 64 akazvitsanangura iye pachake: «Kuva neLinux iripo kunoita kuti zvive nyore kutakura emulators uye kunyaradza mitambo. […] Uye zvakanyanya kukosha, nekuti ndinogona kuzviita.".
Iwe unofanirwa zvakare kuziva kuti ichi chiteshi hachidi a kugoverwa yakakosha kana yakakwana, asi zvinongobvumira iyo Linux kernel kuti itange paNintendo 64. Uye kana iwe uchifarira kudzidza zvakawanda, unogona kuwana iyo boot loader pa GitHub uye iyo faira README.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Inogona here Linux kuiswa paNintendo 64?
Izvi zvinonakidza kuverenga!
Dissenter, browser reGab rinobva paBrave iro rinovavarira kurwisa kudzivirira
Kuderera kweMozilla. Maitiro asingamisike